အင်္ဂလိပ်စာအသံထွက် မှန်ကန်အောင် အသုံးပြုချင်သူတွေအတွက်...! | အိမ်လွမ်းသူ...
အင်္ဂလိပ်စာအသံထွက် မှန်ကန်အောင် အသုံးပြုချင်သူတွေအတွက်...!
ကျွန်တော်ဒီနေ့ တင်ပေးလိုက်တဲ့ Post လေးကတော့ "အောင်အောင်..."လို အင်္ဂလိပ်စာ အသံထွက် အားနည်းတဲ့ သူတွေအတွက်တော့ အရမ်းကို အသုံးဝင်တဲ့ Software လေးပါ...! အင်္ဂလိပ်စာ အသံထွက် မှန်ကန်အောင် သုံးချင်သူတွေအတွက်ကတော့ အရမ်းကို အသုံးဝင်ပါတယ်....!မိမိသိချင်တဲ့ စာကို ရိုတ်ထည့်လိုက်ပါ ပြီးရင် များလေးထောက်လိုက်ပါ Auto ပြန်ပြီးပြေားပေးပါလိမ့်မယ်...!ဖိုင်ဆိုဒ်လေးကတော့ 144MB ရှိပါတယ်...!Portable...လေးဖြစ်တဲ့ အတွက် သုံးရတာ အရမ်းအဆင်ပြေပါတယ်...!
ဒါလေးကတော့ Concise Oxford English Dictionary...လေးပါ...!လိုချင်ရင်တော့ အောက်မှာ Media Fire လေးဖြင့်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်...!
1 Response to အင်္ဂလိပ်စာအသံထွက် မှန်ကန်အောင် အသုံးပြုချင်သူတွေအတွက်...!
Download လုပ်လို့ မရပါ။ ကူညီပေးပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။